Vao haingana ny fahitana bug momba ny fiarovana amin'ny iPhone dia mamela ny hackers hangalatra ny mombamomba anao | Vaovao IPhone
Ny fahitana vao haingana ny bibikely fiarovana amin'ny iPhone dia mamela ny hackers hangalatra ny mombamomba anao
Miguel Gaton | | IPhone Security
Ny faharefoana farany an'ny iPhone izay mety hampidi-doza ny angon-drakitrao manokana Ary ny famelana ireo mpijirika haka ny fanananao sarobidy dia lesoka fiarovana Apple mailaka izay nanala sarona ny orinasa ZecOps.
Na dia navoaka tato anatin'ny andro vitsivitsy aza ny vaovao, araka ny fikarohana nataon'ny manam-pahaizana, dia mety ho nangalatra angona avy amin'ny orinasa 6 hatramin'ny alàlan'ity fomba ity ireo hackers nanomboka tamin'ny taona 2018.
Ny orinasam-paoma dia nandray andraikitra tamin'io ary manandrana mamaha io fahalemena io, mandritra izany fotoana izany, inona no azonao atao raha manana iPhone ianao tazomy ny angon-drakitrao araka izay azo atao?
Voalohany indrindra, ampandrenesina. Ary izany no mahatonga antsika eto. Ny fahalalana izay fahalementsika dia manampy antsika hihatsara, na ahoana na ahoana. Noho izany dia zava-dehibe ny fahalalana hoe inona ilay fahalemena resahintsika.
1 Inona ny faharefoana farany hita amin'ny iPhone?
2 Fomba 3 hiarovana ny iPhone amin'ny fandrahonana amin'ny cyber
2.1 Mampiasà tambajotra tsy miankina virtoaly
2.2 Hamarino tsara fa mitazona ny toetr'andro ny iOS
2.3 Vonoy Siri
Inona ny faharefoana farany hita amin'ny iPhone?
Ny zava-drehetra dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fampiharana mailaka Apple. Tonga ny mailaka banga izay manokatra varavarana amin'ireo mpijirika nefa tsy misy karazana fifandraisana ilaina amin'ny mpampiasa, afaka miditra amin'ny telefaoninao sy mahazo ny angona tadiavin'izy ireo.
Hadisoana somary matotra sahady izay efa notaterin'i Apple fa nahavita namaha ny kinova beta ary koa io dia efa nampiharina tamin'ny fanavaozana manaraka.
Ka, amin'ny fitsipika, eny ianao manana ny iPhone nohavaozina amin'ny farany dikan, tokony efa voavaha ny olana. Inona anefa no ampianarin'izany antsika? Na ny orinasa matanjaka toa an'i Apple aza dia afaka amin'ireo karazana fahalemena ireo ary, noho izany, ny tenantsika dia tsy maintsy voatosika hiaro ny fiarovana ny fampahalalana antsika amin'ny fotoana rehetra.
Noho io antony io, etsy ambany, dia hanome anao andian-torohevitra tsotra be aho hampiharina hitazomana ny angon-drakitrao araka izay azo atao.
Fomba 3 hiarovana ny iPhone amin'ny fandrahonana amin'ny cyber
Mampiasà tambajotra tsy miankina virtoaly
Ny fampiasana tamba-jotra tsy miankina virtoaly (VPN) amin'ny findainao no fomba azo antoka indrindra hivezivezena amin'ny Internet amin'ny findainao nefa tsy hametraka loza amin'ny fiarovana ny angon-drakitrao ary hangalarana ny mombamomba anao rehefa miserasera amin'ny Internet ianao. Raha mbola tsy hainao inona ny VPN Hanazava izany aminao amin'ny fomba tena tsotra aho.
Ny VPN dia mamela anao hifandray amin'ny Internet amin'ny fomba azo antoka sy tsy mitonona anarana avy amin'ny findainao. Ity dingana ity dia ity manaraka ity, ny findainao dia hifandray amin'ny mpizara VPN ary ity amin'ny Internet, mba tsy hisy hahalala ny toerana misy ny findainao ohatra.
Hamarino tsara fa mitazona ny toetr'andro ny iOS
Araka ny efa fantatra, ny fanavaozana dia misy akony amin'ny fiasan'ny telefaona sy mampihatra fiasa vaovao, fa manan-danja kokoa noho ireo rehetra ireo izay ampidirin'izy ireo amin'ny resaka filaminana. Izany no antony, zava-dehibe ny fananana ny rafitra havaozina hatrany amin'ny kinova farany misy, hahazoana antoka fa mandeha tsara ny finday amin'ny lafiny rehetra ary tsy manana fanitsakitsahana fiarovana azo ampiharina aminay.
Raha tsy fantatrao raha manana ny kinova farany amin'ny findainao ianao afaka manamarina azy foana ianao mandeha amin'ny fanavaozana ny setting / General / Software. Raha hita fa tsy mihazakazaka ny kinova farany azonao atao ianao dia azonao apetraka amin'ny toerana iray ihany.
Ary farany, na inona na inona fahombiazan'ny Siri ho anao ary mahasoa toa azy, raha tianao ny hitazona ny angonao ho 100% azo antoka, dia ampirisihiko ianao vonoy ny mpanampy manokana an'i Apple. Tranga no fantatra fa Siri no lakan-drano nandraisan'ireo mpijirika telefaona finday hangalarana ny mombamomba ny mpampiasa.
Efa nandre ny vaovao momba ny fahalemen'ny farany an'i Apple ve ianao? Fantatrao ve fa mampidi-doza ireo fahalemena ireo amin'ny angon-drakitrao? Inona avy ireo dingana hataonao hiarovana ny iPhone-nao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » IPhone Security » Ny fahitana vao haingana ny bibikely fiarovana amin'ny iPhone dia mamela ny hackers hangalatra ny mombamomba anao
India dia manome ny fanafodiny an'i Shina hanandrana sy hanala ireo fampiharana sinoa 59 ao amin'ny App Store
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny iPadOS 14